FITSABOANA NY RENY SY NY ZAZA: Hanatsara ny fandraisana an-tanana ny fampitaovana avy amin’ny Star – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 1:34
Hanampy amin'ny fitsaboana ireto fitaovana ireto.
Accueil/Samihafa/FITSABOANA NY RENY SY NY ZAZA: Hanatsara ny fandraisana an-tanana ny fampitaovana avy amin’ny Star
FITSABOANA NY RENY SY NY ZAZA: Hanatsara ny fandraisana an-tanana ny fampitaovana avy amin’ny Star
Lucien R. 9 octobre 2020
Mbola mila tosika goavana ny sehatry ny fitsaboana ny reny sy ny zaza raha ny eto Madagasikara no asianteny. Tsy vitsy ireo reny mbola maty eo am-piterahana, na ihany koa tsy mahazo zaza noho ny tsy fahampian’ny fitaovana tsy ampy. Antony nahatonga ny orinasa Star, niaraka tamin’ny Fondation Coca-Cola, nanolotra fanampiana ara-pitaovana ho an’ny Minisiteran’ny Fahasalamambahoaka, entina hanatsarana sy hanamafisana ny fandraisana an-tanana, eny amin’ireo Hopitaly natao hitsaboana ny reny sy ny zaza. Araka ny fanazavan’ny Talen’ny Kabinetran’ny Minisiteran’ny Fahasalamambahoaka, hopitalim-panjakana telo eto Madagasikara no hisitraka ireo fampitaovana ireo. Tafiditra ao anatin’izany ny Sampan-draharaha mitsabo ny reny sy ny zaza ao amin’ny Hopitalin’I Toliara, ny “Matérnité” ao amin’ny “Centre Hospitalier de Référence Régionale” ao Maintirano, ary farany ny “Matérnité du centre de Référence du District d’Ikalamavoany.
“Miankina amin’ny filàn’ilay toerana no antony nisafidiana ireo toerana telo ireo. Tsapa fa mbola latsaka ny ara-pitaovana any amin’ireo Distrika telo ireo, ka izany no nandefasana ireo fitaovana ireo avy hatrany any an-toerana”, hoy ny Profesora Razafimahandry Jean Claude, Talen’ny Kabinetran’ny Minisiteran’ny Fahasalamambahoaka.
Tsiahivina fa tamin’ny volana Mey lasa teo no vita ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’ny Orinasa Star, niaraka tamin’ny Fondation Coca-Cola, sy ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’ny hanomezana fampitaovana mitentina hatrany amin’ny 300 000 dolara, hanohanana ny fandraisana an-tanana ny reny sy ny zaza ary ny ankizy. Izao hetsika izao dia tafiditra ao anatin’ny asa sosialy fanaon’ny orinasa Star sy ny Fondation Coca-Cola, ary tafiditra ihany koa ao anatin’ny fanomezana lanja ny mahaolona eo anivon’ny orinasa, izay mifototra amin’ny fanamorana ny fahazoana fitsaboana ho an’ireo olona sahirana. Omaly no natolotra tamin’ny fomba ofisialy ireo fitaovana ireo, tetsy Andranomahery. Fotoana izay natrehin’ny Tale Jeneralin’ny Orinasa Star, Marc Pozmentier, sy ny delegasiona avy amin’ny Minisiteran’ny Fahasalamambahoaka, notarihin’ny Talen’ny Kabinetra.
FANASANA TANANA: Miantoka ny 99 % amin’ny fiadiana amin’ny valanaretina
FAMATSIAN-DRANO: Vita ny fanoloana fantsona tetsy Nanisana
FANDANIANA NY PL 001/2020: Lavin’ny parlemantera sasany noho ny tombontsoa manokana
ADY AMIN’NY FIPARITAHAN’NY COVID-19: Miverina ny Hamehana ara-pahasalamana, tsy misy kosa, ny fihibohana